Wararka - Xalalka granite light light
Xalka granite midabka khafiifka ah
Miridh huruud ah - Maaddada dhagxaanta cad waxay la xiriirtaa birta noole ee birta ah, doorka biyuhu wuxuu sii wadaa oksaydh jaale, waxqabadka ugu dambeeya ee dusha dhagaxa waa gabal ama gabal miridhku yeesho. Biyaha sababa miridhku waxay ka yimaadaan isla meesha uu miridhku ka dhasho, markaa mararka qaarkood waxaad arkaysaa biyaha oo waxaad arki doontaa miridhku.
Wasakhaynta - Subagga cad wuxuu xasaasi u yahay wax kasta oo wasakh ah, sidaa darteed wixii wasakhda dareeraha ah ee ku soo qulqulaya linenka cad waa in waqtiga looga saaraa. Wasakhda caadiga ah waa midabbada iyo midabada saliidda. Qalabka wax lagu nadiifiyo oo ay ku jiraan aagag si taxaddar leh loo isticmaalo, marka ay santuulaadyadan qolka dhagaxa ah, waxay sidoo kale muujin doonaan wax la mid ah ifafaale wasakheynta saliidda
Difaacayaasha wax ku darsada dareeraha waa in la xushaa. Tusaha farsamada, maahan oo kaliya caabbinta biyaha inay ahaato mid sarreysa, heerka farqiga udhaxeeya tusmada asiidhka iyo caabbinta alkali iyo tusmada u adkaysiga biyaha waa inay yaryihiin, iska ilaali si walba ha u qaadan saamaynta dhibcaha biyaha asal ahaan si loo xukumo ilaalinta fiican iyo tan xun.
Saxanku waa inuu ahaadaa mid qallalan kahor intaan la adeegsan wakiilka difaaca.
Nidaamka ilaalinta ee dukaanku wuxuu helayaa 6 dhinac oo wax laga qabanayo, laba jeerna ka hortag burushka. Dhinaca sidoo kale waa in si taxaddar leh loo rinjiyeeyaa.
Ka dib marka wakiilka difaaca uu ku dahaadho heerkulka caadiga ah waa inuu ilaaliyaa seddex maalmood ka dib laamiga, heerkulka 5-15 ℃ marka waqtiga daaweynta ee ka badan 7 maalmood, iska ilaali si aad ula kulanto waqtiga kama dambaysta ah oo kaliya ayaa cadeynaya saxanka wakiilka ilaalinta laamiga.
Qaybta dambe ee guddiga sagxadda dhulka waa in la isku xidho oo la xoojiyo si looga dhigo saamaynta wakiilka difaaca ee ku dhejiida sharootada sibidhka.
Dusha sare ee qalabka dhagaxa ka dib marka dukaanka la rakibo ma doonayo inuu dalbado dusha sare, dusha sare ayaa hawo la hayaa, sagxadda guddiga ayaa lagu rakibay dukaanka ka dib markii awoodda 3 toddobaad ay ku jirto buuxin.
Dayactirka dhulka hemp cad sidoo kale waa in fiiro gaar ah loo yeesho xakamaynta biyaha, sida ugu yar ee suurtogalka ah in lagu xoqo biyo. Haddii ay tahay in biyo la isticmaalo, nadiifi si looga hortago in biyuhu ku soo dhacaan dhabarka sabuuradda dhinacyada.
Nadiifinta maxalliga ah wasakheynta deegaanka. Nadiifiyeyaasha aashitada ku habboon aad ayey uga khatar yar yihiin nadiifiyeyaasha alkaline-ka waana in lagu qasi karaa biyo sida ugu macquulsan.
Hawlgallada kale ee dhulka ka socda ee lagu ilaalinayo dhulka, sida rinjiga derbiga iyo biyaha galaaska ayaa wasakheyn doona dhulka.
Si loo doorto xalka ugu habboon ee siigada electrostatic-ka wax looga qabanayo dhulka, haddii kale waxay wasakheyn doontaa dhulka.